Orinasa fanodinana fitaovana ultrasonic indostrialy - Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana ultrasonic any Sina
Masinina homoegnizer manaparitaka ultrasound 20Khz
Ny homogenizing ultrasonic dia dingan'ny mekanika hampihenana ireo sombintsombiny kely ao anaty ranon-javatra ka lasa kely sy mitovy zarazaraina. Rehefa ampiasaina ho toy ny homogenizers ny processeur ultrasonic, ny tanjona dia ny hampihenana ireo sombintsombiny kely anaty rano hanatsarana ny fitoviana sy ny fitoniana. Ireo sombintsombiny (manaparitaka dingana) dia mety ho soloina na ranoka. Ny fihenan'ny savaivony potika dia mampitombo ny isan'ny sombintsombin'ny tsirairay. Izany dia mitarika amin'ny fihenan'ny pa ...
Masinina sonochemistry ultrasonic ho an'ny fitsaboana rano
sonochemistry ltrasonic dia ny fampiharana ny ultrasound amin'ny fiota simika sy ny fizotrany. Ny mekanika miteraka vokadratsin'ny sonochemical amin'ny ranoka dia ny fisehoan'ny cavitation akustika. Ny cavitation akustika dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny fanaparitahana, fitrandrahana, emulsification ary homogenization. Amin'ny lafiny famoahana dia manana fitaovana samihafa izahay hihaonana amin'ny famaritana ny famaritana isan-karazany: manomboka amin'ny 100ml ka hatramin'ny zato taonina ny tsipika famokarana indostrialy isaky ny andiany. SPECIFI ...
Homogenizer sonicator fanaparitahana ultrasonic
Ny homogenizing ultrasonic dia dingan'ny mekanika hampihenana ireo sombintsombiny kely ao anaty ranon-javatra ka lasa kely sy mitovy zarazaraina. Ny sonicators dia miasa amin'ny famoahana onja mahery vaika amin'ny onjam-peo. Ny onja faneriterena dia miteraka fikorianan'ny rano ary, amin'ny toe-javatra mety, fananganana gel-bitika haingana izay maniry sy mirindra mandra-pahatongany any amin'ny haben'ny resonant'izy ireo, mihetsiketsika mafy ary farany mihintsana. Ity tranga ity dia antsoina hoe cavitation. Ny implosion ...
Fitaovana fanaparitahana ultrasonic
Ny fitaovana fanaparitahana ultrasonic dia mety amin'ny vahaolana isan-karazany, ao anatin'izany ny vahaolana avo lenta. Ny fahefana mahazatra dia manomboka amin'ny 1.5KW ka hatramin'ny 3.0kw. Ireo poti-javatra dia azo aparitaka amin'ny haavon'ny nano.
sonicator fanodinana ranon-tsolika
Ny sonicator mpanodina ranon-tsavony dia manana fampiasa marobe, ao anatin'izany ny fiakaran'ny fihetsiky ny simika sy ny catalytic, ny lysis sela, ny fanaparitahana aloha, ny homogenisation ary ny fihenan'ny habeny. Ny sonicator mpanodina ranoka ultrasonika dia misy fanadihadiana sy famatsiana herinaratra. Ny processeur koa dia manana keypad tactile, memory programmable, pulsing ary ny fiasan'ny fotoana, ny fahaizan'ny remote on / off, ny fiarovana be loatra, ary ny efijery LCD izay mampiseho fotoana fohy sy fampisehoana output. hihaona amin'ny differe ...
Processeur avo lenta, famolavolana fampiharana matihanina, vidin'ny varotra mety, fotoana fandefasana fohy, fiarovana tanteraka aorian'ny fivarotana.